Faminaniana momba ny mpividy antsinjarany sy mpivarotra eCommerce ho an'ny 2021 | Martech Zone
Zoma Janoary 15, 2021 Zoma Janoary 15, 2021 Douglas Karr
Raha toa ka sahirana amin'ny alàlan'ny areti-mandringana sy ny hidin-trano ny orinasanao amin'ny varotra na ecommerce dia azonao atao ny miasa mandritra ny fotoana fohy amin'ny Fanentanana ho an'ny fetin'ny mpifankatia satria hita fa ity dia taona farany handaniam-bola - na eo aza ny fanamby ara-toekarena! Angamba ny fandaniana fotoana bebe kokoa any an-trano miaraka amin'ireo olon-tiantsika dia mampirehitra ny afon'ny fitiavana… na mitaky antsika hanonitra (vazivazy).
Ny fanadihadiana nataon'ny National Retail Foundation dia naminavina ny drafitry ny mpanjifa handany $ 196.31 eo ho eo 21% noho ny tamin'ny taon-dasany rakitsoratra $ 161.96 teo aloha. Ny fandaniana dia antenaina ho $ 27.4 miliara, hiakatra 32% amin'ny $ 20.7 miliara tamin'ny taon-dasa.
Antontan'isa momba ny varotra amin'ny andron'ny mpifankatia
Araka ny National Retail Foundation, Fetin'ny mpifankatia dia tsy andro intsony hanehoana ny fankasitrahanao ny fitiavanao ny vadinao. Ny mpanjifa dia mividy fanomezana ho an'ny hafa manan-kaja, ny zanany, ny mpampianatra azy, ny mpiara-miasa aminy… na ny biby fiompy aza! Ny 15% ny Amerikanina aza mividy fanomezana ho an'ny fetin'ny mpifankatia.
Fandaniana ho an'ny mpanjifa - Nilaza ny mpanjifa fa handany $ 30.19 eo ho eo amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviana hafa noho ny vady, miakatra kely amin'ny $ 29.87 tamin'ny taon-dasa; $ 14.69 amin'ny namana, hatramin'ny $ 9.78; $ 14.45 amin'ny mpiara-mianatra sy mpampianatra ny ankizy, hatramin'ny $ 8.63; 12.96 $ ho an'ny mpiara-miasa, $ 7.78; $ 12.21 amin'ny biby fiompy, $ 6.94 $, ary $ 10.60 ny hafa, $ 5.72.
Fetin'ny mpifankatia ho an'ny biby - 27% amin'ireo mpanjifa no milaza fa hividy fanomezana Valentine ho an'ny biby fiompy, ny olona ambony indrindra amin'ny tantaran'ny fanadihadiana ary hatramin'ny 17 isan-jato tamin'ny 2010 dia mitentina 1.7 miliara dolara.
Mandany taona - Age 18-24– drafitra handaniana $ 109.31 salanisa. Ny taona 25-34 dia mazàna manana karama ambony sy ankizy hividianana vola ary manantena handany $ 307.51. Ny taona 35-44 dia mpandany vola be indrindra amin'ny $ 358.78.
Fandaniana amin'ny miralenta - Toy ny isan-taona amin'ny fanadihadiana, ny lehilahy dia mikasa ny handany mihoatra ny vehivavy amin'ny $ 291.15 raha ampitahaina amin'ny $ 106.22.
Sokajy fiantsenana malaza amin'ny fetin'ny mpifankatia
Daty alina - $ 4.3 miliara dolara no hampiasaina amin'ny famoahana alina manokana ataon'ireo 34% mpandray anjara amin'ny Andron'ny Mpifankatia.
Candy - $ 2.4 miliara dolara no holanin'ny mpanjifa 52% izay mikasa ny handray anjara amin'ny fanomezana ny fetin'ny mpifankatia - miaraka am-panomanana sôkôla 22%.
Jewelry - 5.8 miliara dolara no lanin'ny 21% amin'ireo mpankalaza izay mikasa ny handray anjara.
Flowers - $ 2.3 miliara dolara no holanin'ireo 37% izay mikasa ny handray anjara.
Gift Cards - 2 miliara dolara no hoentina amin'ny karatra fanomezana amin'ity taona ity.
Miarahaba karatra - $ 1.3 miliara dolara hoentina amin'ny karatra fiarahabana amin'ny fetin'ny mpifankatia.
Ny sokajy ambany dia misy ny fitaovana, ny fidirana amin'ny gym, ny kojakojam-panatanjahan-tena, ny kojakojan-dakozia, ny biby feno entana… ary ny mixtapes (mbola ataon'ny olona ve izany ?!).
Fanentanana ho an'ny fetin'ny mpifankatia
Tadidio fa mbola tery ny vola ho an'ny mpanjifa marobe amin'ity taona ity ary maro ny mpandray anjara amin'ny fanomezana fanomezana ny fetin'ny mpifankatia no hatao minitra farany… ka atombohy ny fampielezan-kevitra ataonao ary mahareta hatrany hatramin'ny andro ahafahanao manatitra!
Izahay dia nizara lahatsoratra sy infographic hafa tamin'ny sasany hevitra lehibe amin'ny Fetin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny Andron'ny Mpifankatia!
Tags: vatomamysôkôlafihetsiky ny mpanjifaecommercefanomezana karatrakaratra fiarahabanamampiavakafiravakafitiavanamanimanitra fitiavanatrano fisakafoananampaninjarafetin'ny mpifankatiaAndro valentine infographicNy fandaniam-bolan'ny mpanjifa amin'ny fetin'ny mpifankatiaFanomezana ny fetin'ny mpifankatiaNy fandaniam-bola amin'ny fetin'ny mpifankatiaFiantsenana fetin'ny mpifankatia
SimpleTexting: Sehatra fandefasana hafatra SMS sy hafatra
Inona no atao hoe fanapahana fitomboana? Ireto misy teknika 15